गैरजिम्मेवार जनप्रतिनिधीः लकडाउनको ४३औं दिनमा सदा वस्तीमा राहत - News Today
गैरजिम्मेवार जनप्रतिनिधीः लकडाउनको ४३औं दिनमा सदा वस्तीमा राहत
राजविराज, २३ वैशाख । हाम्रा जनप्रतिनिधीहरु जनताप्रति कति जिम्मेवार छन् ? जनताको दुःख पीडामा कति समवेदनशिल छन् ? यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको सप्तरीको विष्णुपर गाउँपालिका वडा नम्वर–६ स्थित गोरगामा रञ्जितपुर वस्ती ।
गत चैत्र ११ गतेदेखि नेपाल सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ । अहिले पनि लकडाउन जारी नै छन् । लकडाउन भएको ४३औं दिन मात्र त्यहाँका जनप्रतिनिधीले स्थानीयवासिन्दालाई राहत सामग्री वितरण गरेको छ । राहत सामग्रीमा रहेको छ सोना मन्सुली उसिना चामल १५ किलो, मसुरो दाल २ किलो, तोरीको तेल एक लिटर र एक पौका नुन उपलब्ध गराएको छ । वडा अध्यक्ष बहादुर सदाको नेतृत्वमा उक्त सामग्री वितरण गरिएको छ ।
दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएको उक्त वडाको सदा वस्तीका अधिकांश परिवारमा लकडाउन शुरु भएको एक हप्तापछि खाद्यान्न अभाव भएको थियो । कतिपय परिवारमा एक छाक मात्र चुलो बल्ने गरेको थियो । कैयौं रात सदा वस्तीका वासिन्दाहरुले नुन र मुरही खाएर जिन्दगी धान्दैआएका थिए ।
लकडाउन शुरु भएको एकसाता पछि नै राहत वितरणकालागि नामावली संकलन गरिएको थियो । यद्यपी आज भोली भन्दा भन्दै वडा अध्यक्ष लगायतका प्रतिनिधीहरु पन्छिदैआएका थिए । सदा वस्तीका एकआध वाहेकका परिवार बोनी, मजदूरी, रिक्सा चलाउने लगायतका काम गर्दैआएका छन् । लकडाउन भएपछि उनीहरुको काम नै नचलेपछि छाक टार्न समेत समस्या भएको थियो । लकडाउन अझैं लम्बियो भने राहत स्वरुप पाएको उक्त
Previous : प्रदेश नम्वर २ का आठै जिल्ला रेड जोनमा
Next : कोरोनाले बिर्सायो श्रमिक दिवस